Fanadinana bakalorea: « Cours faradoboka » ataon’ny CUA | NewsMada
Fanadinana bakalorea: « Cours faradoboka » ataon’ny CUA
Nikarakara “Cours faradoboka” ho an’ireo tanora mpianatra hanala fanadinana bakalorea mandritra ny dimy andro ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) sy ny mpiara-miombon’antoka aminy. Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, izany famerenana faobe izany tao amin’ny boriborintany fahadimy.
Natomboka tamin’ny fihaonana teo amin’ireo mpianatra sy mpampianatra nandaminana ny fandaharam-potoana ny hetsika. Nanotrona ny fanokafana ny delegen’ny boriborintany fahadimy, Rakotobe Emmanuel Richard, sy ireo mpiara-miasa aminy.
Marihina fa natao ho an’ireo sokajy rehetra ny fampianarana, ary ahitana ny taranja rehetra. Ny alatsinainy hatramin’ny alarobia ny fampianarana, hanomboka amin’ny 8 ora ka hatramin’ny 11 ora ny maraina. Amin’ny 1ora 30 hatramin’ny 4 ora kosa ny hariva. Ny alakamisy kosa, manomboka amin’ny 1 ora 30 ary ny zoma, amin’ny 8 ora hatramin’ny 11 ora sy sasany.
Ao amin’ny biraon’ny boriborintany fahadimy ihany ny toerana hianarana. Marihina fa maimaimpoana ny fampianarana, araka ny toromariky ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao.